विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास, भीडभाडमा नजान आग्रह | Makalukhabar.com
काठमाडौँ । यतिखेर विश्वभर कोराना भाइरसको त्रास फैलिएको छ । हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार चीनका १८ शहरमा सङ्क्रमणको प्रकोप निकै तिव्ररुपमा फैलिएको छ ।
सतर्कताका लागि चीनका संक्रमित शहरमा यातायातमासमेत प्रतिवन्ध लगाइएको छ । चिनियाँ सरकारले देशभरको उडान सेवा, रेल र बससेवामा भाइरस पत्ता लगाउन राष्ट्रव्यापी उपाय अपनाउन आदेश दिएको छ ।
शनिवार सम्म चीनमा मात्रै यो भाइरसले ४२ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । ज्यान गुमाउने र संक्रमितको संख्यामा तिव्र वृद्धि भइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन् । संक्रमितको संख्या २८७ पुगेको छ । यो भाइरसको संक्रमणको कारण यात्रामा प्रतिबन्ध लगायत अन्य किसिमका सतर्कता अपनाइएका छन् । करिब पाँच करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका छन् ।
शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा पनि एक जना विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो । चीनको वुहान शहरबाट फर्किएका एक नेपालीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भेट्टिएपति स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
अमेरिकाको सियाटलमा पनि एक जनामा कोरोनाको संक्रमण भएको अमेरिकी अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन् । यसको संक्रमण अझै फैलनसक्ने बताइएको छ । कोरोना भाइरस चीनको हुवेइबाट केही दिनअघि अमेरिका फर्किएका एकजना अमेरिकी नागरिकमा यसको सङ्क्रमण भेटिएको पुष्टि भएको हो ।
यस्तै जापनमा पनि एक जनामा यो भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । यसले विश्वका अन्य मुलूकहरु दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, मकाउ र थाइल्याण्डमासमेत प्रवेश गरीसकेको बताइएको छ । फ्रान्समा पनि तीनजनामा यसको संक्रमण भएको पुष्टि गरिएको छ ।
यो भाइरसबाट विश्वका अन्य मूलुकमा पनि संक्र बढीरहेको भएपनि हालसम्म मृत्यु हुनेमा चिनिया नागरिक मात्रै छन् ।
वैज्ञानिक भाषामा यसलाई ‘२०१९– एन सीओभी’ भाइरस भनिन्छ । उक्त भाइरस कोरोनाभाइरस वर्गको एक खालको नयाँ प्रजातिका रुपमा विकास भएको वैज्ञानिकले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार यो भाइरस यसअघि पनि मानिसमा फेला परेको थियो । वैज्ञानिकले सन् २००० को दशकको शुरुआतमा नै यो भाइरसको प्रकोप बढेको बताएका छन् । उनीहरुले त्यस समयमा विश्वका विभिन्न देशमा यो भाइरसको सङ्क्रमण बढेको र यसले ती देशमा झन्डै ८०० मानिसको ज्यान लिएको सार्स भाइरस पनि एक प्रकारको कोरोना भाइरस नै हो भनेका छन् ।
लक्षण कस्ता छन् ?
यो भाइरस सङ्क्रमण भएपछि खासगरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिने गर्दछ । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने यस सङ्क्रमणपछिका लक्षण हुन् । यस भाइरसको सङ्क्रमणपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै जाने पनि अर्को एक समस्या हो ।
यस भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जान थालेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताएको छ । यस्तो अवस्थाको घोषणा गर्ने विषयमा सोच्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेकोले हाल चीनमा विशेष स्वास्थ्य विज्ञको समूहले आवश्यक प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको बताएका छन् ।
यस प्राणघातक भाइरसले उत्पन्न गरेको अवस्थासँग जुध्न विश्वव्यापीरुपमा नै जनस्वास्थ्य आपतकालका रुपमा घोषणा गर्न सकिने विषयमा आवश्यक तयारी भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । यस भाइरसका सङ्क्रमित चीन र चीनका छिमेकी देशका अतिरिक्त अमेरिकामा पनि भेटिइसकेकाले यस विषयमा सोच्नुपर्ने बताएका हुन् ।
चीनका विभिन्न २५ प्रान्तका क्षेत्रमा यो भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ । स्थानीय प्रशासनले जङ्गली जनावर र पशु बजारका क्षेत्रमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ भने मानिसको बढी आवतजावत हुने विमानस्थल, बसपार्क र रेलमार्ग स्टेसनमा पनि स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध मिलाइएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
हुबेई प्रान्तमा नै यसबाट धेरैको ज्यान गएको छ । चीनका स्वास्थ्य मन्त्री ली बिनले कोरोना भाइरसबाट हुबेई प्रान्तमा नै सबभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको जानकारी दिनुभएको छ । मृत्यु हुनेमध्ये धेरै ४८ देखि ८९ वर्ष उमेरका व्यक्ति रहेका पनि जनाइएको छ । अधिकारीले बढी उमेरका मानिसमा यसको सङ्क्रमण अझ बढी देखिएको बताएका छन् । डब्लुूएचओको तथ्याङ्कअनुसार कुल सङ्क्रमितमध्ये ७२ प्रतिशत ४० वर्षमाथिका छन् । यस्तै सङ्क्रमितका ६४ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् ।
यसबाट निको भएर करिब एक हजार जना व्यक्ति अस्पतालबाट घर पनि फर्किएका छन् तर उनीहरुलाई पनि विशेष निगरानीमा राखिएको बताइएको छ । चीनको वुहानको जनसङ्ख्या भन्डै एक करोड रहेको छ । त्यसैले उक्त सङ्क्रमणको उत्पत्ति भएको सो क्षेत्रमा सरकारले बढी निगरानी राखिरहेको पनि बताइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हनोम गुब्रोहयसोसले चीन सरकारले पछिल्लो समयमा यस सङ्क्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमको स्वागत गरेका छन् । उनले चिनियाँ नयाँ वर्षको एक हप्ता लामो छुट्टी मनाउन एक ठाउँबाट अर्कोमा यात्रा गरिरहँदा यो सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्था चर्किन सक्नेतर्फ सतर्क रहन र त्यसको रोकथामका उपायमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्।
वुहानमा जीवित पक्षी र जङ्गली जनावरको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र त्यस्तो प्रतिबन्धको पालना भए नभएको जाँच्न प्रहरीले कडा मात्रामा निगरानी गरिरहेको पनि बताइएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार सर्पबाट मानिसमा सरेको उल्लेख गरिए पनि हालसम्म यसबारे सहि जानकारी आइसेकेको छैन् । डब्लूएचओले यो भाइरस सम्भवतःपशुबाट मानिसमा सरेको भए पनि कुन पशुबाट सरेको हो भन्ने बारे अझै स्पष्ट भइनसकेको जनाइएको छ ।
वुहानका नगरप्रमुखले अत्यावश्यक कारणले बाहेक उक्त शहरको भ्रमण नगर्न पनि सबै नागरिकलाई आह्वान गरेका छन् । वुहान यस सङ्क्रमणको केन्द्रमा रहेकोले त्यहाँ बढी कार्यक्रम लक्ष्य गरिएको छ । झन्डै नब्बे लाख जनसङ्ख्या भएको वुहानका बासिन्दालाई भीडभाडमा नजान र सार्वजनिक जमघट कम गर्न पनि भनिएको छ । सरकारले शनिबारसम्म चीनका १८ वटा शहरकै यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण : मास्क लगाएर मात्रै भारत जान अनुमति
फागुन १२, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको पश्चिमी नाका गड्डाचौकीबाट भारत जाने नेपालीले नेपाल–भारत सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले ‘मास्क’ लगाउन अनिर्वाय गरेको छ ।कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम गर्न भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा मास्क लगाएर मात्रै आवातजावत गर्न आग्रह गरिरहेको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०ले... जारी राख्नुहोस...
वीपी प्रतिष्ठानमा तलब वृद्धि गर्न विज्ञ समिति गठन
फागुन १२, धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका कर्मचारी समन्वय समिति र कार्यवाहक उपकुलपति प्रा.डा. गुरु खनालबीच २० प्रतिशत तलब वृद्धिलगायत ५ बुँदे मागबारे सिहमति भएको छ । नेपाल सरकारले गत आवमा निर्धरण गरेको २० प्रतिशत तलब बृद्धि लगाएत पाँच बुँदे मागबारे आइतबार कार्यबाहक उपकुृलपति... जारी राख्नुहोस...
कोरोना भाइरस : दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीहरु त्रसित
फागुन १२, एजेन्सी । दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली नागरिकहरूले आफूहरू आत्तिएको बताएका छन्।दक्षिण कोरियामा झन्डै ४६,००० हजार नेपाली नागरिक रहेको बताइन्छ। तीमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका व्यक्ति र विद्यार्थी छन्।सुरुमा राजधानी सोलमा मात्रै देखिएको सङ्क... जारी राख्नुहोस...
दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
फागुन १२, एजेन्सी । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको सङ्ख्या बढेपछि इटली र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले उक्त प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्।दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म ७६० जना सो भाइरसबाट संक्रमित भएको र तीमध्ये सात जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।सङ्क्रम... जारी राख्नुहोस...
कोरियाका नेपालीमा कोरोना त्रास : राजदूतावास भन्छ- 'नेपाली संक्रमित छैनन्, सचेत रहन भनेका छौं'
फागुन १२, काठमाडौं । कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले कोरियामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट कुनै पनि नेपाली संक्रमित नभएको बताएको छ । दक्षिण कोरियामा कोरोनाको संक्रमण देखा परे पनि कोरियामा रहेका कुनै पनि नेपालीलाई संक्रमण देखा नपरेको दूतावासले बताएको हो ।दूतावासका श्रम कन्सुलर डिल्लीराम बास्तोलाले अहि... जारी राख्नुहोस...
राकममा एकसय शैयाको अस्पताल निर्माण हुने
फागुन १२, दैलेख । दैलेखको आठबीस नगरपालिकास्थित राकममा एकसय शैयाको अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र आठबीस नगरपालिकाबीच ‘ट्रमा सेन्टर’सहितको एकसय शैयाको अस्पताल निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण तथा सेवा सञ्चालन गर्न... जारी राख्नुहोस...
चीनमा कम्युनिष्ट शासनपछिको ‘सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सङ्कट’ कोभिड–१९ : राष्ट्रपति सी
फागुन ११, बेइजिङ । चीनमा दुई हजार ४०० भन्दा बढीको ज्यान लिएको नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको शासन सुरू भएपछिको ‘सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सङ्कट’ भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बताएका छन् । चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति सफल भएसँगै सन्... जारी राख्नुहोस...
जनरल हस्पिटलको सहयोगमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
फागुन ११, विराटनगर । श्री जनज्योति युवा क्लबको आयोजना र जनरल हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टरको प्राविधिक सहयोगमा एक दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । सप्तकोसी नगरपालिका २ फत्तेपुरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको हो । सनिबार सम्पन्न भएको स्वास्थ्य शिविरमा २ सय १३ जनाले स्वास्थ्य जाँच ग... जारी राख्नुहोस...
प्रतिष्ठानको वेथितिः पैसा तिरेर राखेको शव अन्यत्र सार्दा तनाव, डाक्टरमाथि हातपात
फागुन ११, धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मर्चरीमा राखिएको शव कर्मचारीले अन्यत्र सारेपछि उत्पन्न तनावमा प्रतिष्ठानका डाक्टरमाथि नै हातपात भएको छ । आफन्तले शव पहिचान गर्न नसकेपछि प्रतिष्ठानमा तनाव उत्पन्न भएको हो । उनीहरुले फरेन्सिक विभागका एशोसिएट प्रोफेसर डा। अभिषेक कर्णमाथि हातप... जारी राख्नुहोस...
अत्याधिक पिरो खाँदा स्वास्थ्यमा पर्छ यस्तो असर
फागुन ११ । पछिल्लो समय सामाजिक संजालहरुमा अत्यधिक पिरो खाने ‘च्यालेन्ज’ भाइरल बनिरहेको छ । यसमा युवाहरुले विशेषगरी दुई गुणा पिरो भनिने ‘स्पाइसी राम्यन’ अर्थात् कोरियन ब्रान्डको चाउचाउ खाइरहेका छन् । स्वादमा मिठो र अत्याधिक पिरो यो खानेकुराले चाख्न जोकोही उत्साहित हुने गरेको छन् । तर हप्तौँसम्म पिरो... जारी राख्नुहोस...